Kintan'ny Neuter sy Pulsars: Famoronana sy fananana
Science Stars & Planets
Inona no mitranga rehefa mipoaka ny kintana goavana? Manangana supernovae izy ireo , izay sasantsasany amin'ireo hetsika goavana indrindra eo amin'izao rehetra izao . Mampisy fipoahana goavana toy izao ny fampiroboroboana an'arivony, ka mety hiteraka vahindanitra manontolo ny hazavana azony. Na izany aza dia mamorona zavatra be dia be avy amin'ny ravina izy ireo: kintana tsy mitongilana.
Ny famoronana ny kintana neutron
Ny kintan'ny tsy mitongilana dia kintana tena goavam-be tsy mitaona.
Noho izany, ahoana no mahatonga ny kintana masiaka ho toy ny zavatra mamirapiratra ho an'ny kintana tsy misy fangarony sy manjelanjelatra mahery vaika? Izany rehetra izany no mahatonga ny kintana hiaina ny fiainany.
Ny kintana dia mandany ny ankamaroan'ny fiainany amin'ny zavatra fantatra amin'ny anarana hoe ny laharana voalohany . Ny dingana voalohany dia manomboka rehefa manjono ny kintana nokleary ao anatin'ny fotony. Mifarana izany rehefa reraka ny karbônina ao anaty ny kintana ary manomboka manomboka ny singa mavesatra kokoa.
Miankina amin'ny lamesa izany
Raha vao misy kintana mamela ny fizarana voalohany dia hanaraka lalana iray manokana izay alamina amin'ny volany. Ny habeny dia ny habetsaky ny fitaovana misy ilay kintana. Ny kintana izay manana masoandro maherin'ny valo maherin'ny valo (iray monja amin'ny masoandro no mitovy amin'ny an'ny Masoandro) dia handao ny fizotry ny loha-hevitra ary hamakivaky ny dingana maromaro raha mbola manohy mampiato ny singa miakatra amin'ny vy izy ireo.
Raha vantany vao mijanona ao anaty kintana iray ny fifangaroan-tsolika, dia manomboka ny fifanekena, na tsy miankina amin'ny tenany, noho ny herimpo goavambe eo amin'ny saranga ivelany.
Ny ampahany ivelany amin'ny kintana dia "mianjera" eo amin'ny fotony sy ny fibebahana mba hamoronana fipoahana goavana antsoina hoe supernova Type II. Raha miankina amin'ny habetsahan'ny voany, dia ho lasa kintana tsy mitongilana na loha mainty izy io.
Raha ny ankabeazan'ny fotony dia eo anelanelan'ny 1.4 sy 3.0 ny masoandro dia ho lasa kintana tsy mitongilana fotsiny ny fotony.
Ny protons ao anaty fiaraha-miady dia mifamatotra amin'ny elanelana mahery vaika ary mamorona neutrons. Ny vatana dia manosihosy ary mandefa onja mangatsiaka amin'ny alalan'ny fitaovana izay latsaka ao aminy. Ny fitaovana ivelany avy amin'ilay kintana dia avy eo dia alefa any amin'ny fitaovana manodidina ny famoronana ny supernova. Raha mihoatra kokoa noho ny masin'ny masoandro main'ny masoandro ny ravin-kibo fototra, dia misy ny fahafaha-manatsara azy hanohy hanangom-bokatra raha toa ka misy lavaka mainty.
Karazan'ny kintana Neutron
Ny kintan'ny Neuter dia zavatra sarotra hodinihina sy takarina. Mamoaka hazavana izy ireo manerana ny ampahany betsaka amin'ny sehatr'ity elektromagnetika ity-ireo làlam-pamantarana maro samihafa-ary toa miovaova kely avy amin'ny kintana ka hatramin'ny kintana. Na izany aza, ny tena zava-misy hoe ny kintan'ny neutron rehetra dia maneho ny toetra samihafa dia afaka manampy ny astronoma hahatakatra izay manosika azy.
Angamba ny sakana lehibe indrindra amin'ny fandalinana kintana tsy mitongilana dia midika fa mampihetsi-po tokoa izy ireo, ka manjavona fa ny 14 metatra dia mety ho betsaka ny volon'ny kintana tsy misy kintana toy ny Moon. Ny astronoma dia tsy manana fomba hanamboarana an'io karazana hafanana ety an-tany io. Noho izany dia sarotra ny mahatakatra ny fisian'ny zavatra mitranga. Izany no mahatonga ny fianarana ny hazavana avy amin'ireo kintana ireo dia tena manan-danja tokoa satria manome antsika fanazavana momba ny zava-mitranga ao anatin'ny kintana.
Milaza ny mpahay siansa sasany fa ny kôdeksa dia tarihin'ny valan-tseranana maimaim-poana. Ny hafa dia mitsipaka fa ny corne dia feno karazana karazana exotic toy ny pio.
Ny kintan'ny Neutron koa dia manana tanimboly matanjaka be. Ary ireo saha ireo dia tompon'andraikitra amin'ny famoronana ny taratra X sy ny gamma izay hita avy amin'ireo zavatra ireo. Satria ny elektrôna dia mihamidina manodidina sy manerana ny tsipika maitso dia mandefa ny taratra (fahazavana) amin'ny làlan-dalan'ny optika (fahazavana azontsika jerena amin'ny masontsika) ho an'ny gamma-ray mahery vaika.
Ny astronoma dia mihevitra fa ny kintan'ny tsy neutron rehetra dia mihodina ary manao haingana be. Vokatr'izany, ny fanamarihana sasany amin'ny kintana tsy mitongilana dia manome "sonia" ny mari-pamantarana. Ny kintan'ny neutron dia matetika antsoina hoe STARS PULSating (na PULSARS), saingy samy hafa amin'ny kintana hafa izay manana alim-bolana.
Ny fikosehana amin'ny kintan'ny kintana tsy mitongilana dia noho ny fihodinany , izay toy ny kintana hafa izay manintona (toy ny kintana cephida) mivoatra rehefa mihalehibe sy mifototra ny kintana.
Ny kintan'ny Neutron, ny pulsars, ary ny lavaka mainty dia ny sasany amin'ireo zavatra tena miavaka amin'ny universe. Ny fahatakarana azy ireo dia ampahany amin'ny fianarana momba ny fizikan'ny kintana goavambe sy ny fomba nahaterahany, niainany ary maty.
Natontan'i Carolyn Collins Petersen.
Ny "Mpanjakavavin'ny tandroka" lehibe indrindra eto an-tany dia "any ivelany"
Sarin'ny Constellation Pictures
Afangaro mainty hoditra: Beemoth galactique
Visions from Space Telescope Hubble
Manana kintana hafahafa ny mason'ny kintana iray
Fantaro ny Aldebaran, ny mason'ny afo mirehitra afo mirehitra
Fantaro ireo kintana akaiky indrindra amin'ny Masoandro
Inona no atao hoe Energy Energy?
Inona no atao hoe quasars manambara ny momba izao tontolo izao?
Tsidiho ny mpiara-monina: Proxima Centauri sy ny Planet Rocky
Mpilalao lefom-piraketana manokana
Top Colleges Oregon
Tiako ity! Mampiasa ny Gustar amin'ny teny Espaniôla
Fiaramanidina telo Gorges
Fandraisana amin'ny Oniversiten'i Whitworth
Valin'ny ohabolana iray ho an'ny Taratasy fanesorana kolejy
Ny tantaran'ny arabe manodidina ny masoandro
Nahoana no zava-dehibe ankehitriny ny Tabernakely?
Ny tontolon'ny zava-drehetra - Inona no mifanitsy amin'ny arkeology?
Hawk Bells - Fitaovana Medieval sy Mississippian Trinkets
Fantaro ny fomba hifampiresahana "Ranger" (mikarakara)
Anarana iombonana amin'ny teny frantsay Teny andehilahy amin'ny teny frantsay Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza
Torohevitra taorian'ny grady
Mankalaza ny Olona Amin'ny Hoalan'i Donald Trump